SIDA LOO XIIRTO DIGAAGGA, ISTICMAAL MAYRAJI SI AAD U RIIXDO - XOOLAHA
Sidee loola wadaagi karaa digaaga, duck iyo goose leh mooska
Milkiilaha kasta oo leh hoyga gaarka ah ee guryaha gaarka ah ama kariimka ah ayaa si dhakhso ah ama gadaal ah u soo gabagabeynaya - waa in aan leeyahay waxyaabo nololeed oo guri ah: digaagga, shimbiraha, berriga, oo dhammaantoodna way ka sii wanaagsan yihiin! Oo hadda wax walba diyaar ayuu u yahay - diyaargarow habeenkii, dabaasha socod, quudinta qudaarta, iyo shimbir shimbiraha ayaa la keenay. Shimbirta ayaa koreysa, miisaankuna wuu kordhaa, waxayna timaadaa wakhtigii ay u adeegi lahayd, gacmo koray, miiska. Oo halkan waxaad u baahan tahay inaad ka fekerto sida loo maareynayo shimbirta si sahlan oo dhakhso badan. Waxaan kaa caawinaynaa inaad si faahfaahsan u baratid arrintan.
Sida loo tuuro shimbir
Waa jahwareer si ay u beerto oo u koraan digaagga: waxaa jiri doona ukun, hilib caafimaad leh iyo xitaa hoos iyo baaluq barkimooyin, bustayaal iyo dhar. Haddii ukumaha digaaga lagu kaxeeyo iyada oo aan faragelin, markaa si aad u hesho hilib tayo sare leh iyo baadad nadiif ah, waxaad u baahan tahay inaad baratid sida si habboon u riixaan bakhtigu. Digaagga iyo turkiga ruxday ka dib markii la gowracay, iyo ducks iyo goose - 2 saacadood ka dib si loo badbaadiyo baadad iyo hoos.
Qeybta ka saarista tufaaxa, sida qaanuunku, waa tan: marka hore ka saar buco ka soo saaraha iyo baalasheeda, ka dibna - ka soo laabo naaska, dhabarka, iyo ugu dambeyntii dhan lugaha. Intaa waxaa dheer, baalasha iyo hoos ujinta si taxaddar leh looga saaro, ilaalinta sharafta maqaarka. Ka dib markii ay ruxaan shimbirta, waxay saaraan hadhaaga meydka ah ee mindhicirta oo ay ku gubi karaan baqtigaa leh olol. Qalabka waxaa lagu samayn karaa labadaba gacanta iyo qalabka farsamada - tusaale, nadiifinta digaaga.
Ma taqaanaa? Haddii ujeedadu tahay in la helo barkin aad u jilicsan ama buste, waxaad u baahan tahay inaad buuxisid bacda ama baalasha, ka baxsan kabaha adag.
Ka hor inta aan la gowracin, waxaa lagu talinayaa inaanan ku quudin shimbirta dhawr saacadood si loo nadiifiyo dabiiciga ah ee caloosha oo laga soo saaro quudinta, halka ay tahay inuu helo biyo cusub si xor ah u heli kara. Nidaamku wuxuu ku habboon yahay in lagu fuliyo booska fadhiga, isagoo saaraya baqashada iyo weelasha boogaha, hoos udhaca iyo ugu dambeyntii shimbiraha hortagay. Gawaarida jajabka ee hal baqtig ayaa qaadata qiyaastii nus saac. Waxaad gacanta ku dhigi kartaa shimbirta sidii rujis ah oo qalalan, iyo isticmaalka qashinka.
Ku dhejinta horay-u-qabashada. Ka dib markii la gowraco, shimbiruhu waxay dhiiga u daadiyaan illaa 5-7 daqiiqo, halka xajinta baqtigana ay qoorta ku xirto, qoorta hoos u dhigto. Kadibna digaagga ama shimbiraha kale ayaa gebi ahaanba la dhex geliyaa taangiyo waaweyn oo leh biyo kulul (heerkul aan ka yarayn 90 °) nus daqiiqo. Saameynta biyaha karkaraya waxay furi doonaan maqaarka maqaarka waxayna fududeynayaan habka loo jaro baalasha.
Qubeysigu waa inuu ka taxaddaraa in uusan maqaarka dhaawac u geysan dhaqdhaqaaq fiiqan. Ka dib markii tababar yar, waxaad ku habayn kartaa shimbirta rubuc saacad ah, iyo hal maalin, boogaha ka soo boodo dhowr bakhti. Cuncunku wuxuu siin karaa casaan hilibka.
Nadiifinta qallalan. Habka rubbada qallalan ma u dulqaadan karo dib u dhigista, boogaha waa in lagu fuliyaa qandho kulul. Ka soo kabashada baalalka daboolka iyo baalasheeda, sii wad nadiifinta baalasha dib u laabta, laabta iyo ugu dambeyntii baalasha. Boodh yar ayaa laga soo saaraa xoog xoog leh, laakiin dhaqdhaqaaq adag oo ka soo horjeeda kobaca, mid ayaa ka qaadi kara bucooyinka dhowr hal sawir. U daadinta shimbirta maqaarka iyadoo hal gacan ah, waad fududayn kartaa oo dardar gelin kartaa nuugista.
Qalabaynta farsamooyinka leh ee ku dheggan
Xilliga xagaaga iyo xilliga dayrta waxaa jira dhibaatooyin dhaqaale oo badan, waxaad u baahan tahay inaad waqtiga ku jirtid, iyo su'aasha dabiiciga ah ayaa soo baxaysa - sida ugu dhakhsaha badan u dhajiso shimbir shimbir ama dhowr kiis oo isku mar ah? Maaddaama ay soo cusboonaatay soo jiidashada hilibka digaaga, arrimahani waxay noqon karaan mooska si ay u dillaacdo digaagga. Tani waa qalab yar, waxoogaa xasuusin ah oo ruff ah, taas oo, halkii, kumbiyuutarrada, xoqan wareega ayaa lagu xoqay "faraha".
Ka feker sida habsami-u-shaqeyntu u shaqeyso. Si aad u bilawdo, gawaarid kasta ayaa la qaadaa - gardaro, mishiinka, qalabka wax lagu shubo, ama qalab koranto oo koranto ah. Markaas koontada peroshchipalnaya waxay ku xiran tahay layidhka, mashiinka shaqeynaya wuxuu ku xiraa lifaaqa, wuxuu jeexjeexaa oo wuxuu ka soo bixiyaa shimbiraha shimbiraha leh caag ama silikoon "faraha".
Shaqada, waxaad u baahan tahay inaad ku rakibto mashiinno leh mashiinka dusha sare ee dusha sare iyo bedelida shimbirta shimbiraha ee qalabka isbeddelka leh daboolka hore. Xirfadaha noocaas oo kale ah waxay ku kordhinayaan xajinta baqtiga ilaa 6 daqiiqo, waxaa loo isticmaali karaa labadaba guriga dhexdiisa iyo sidoo kale ugaadhsiga ciyaaraha raaxada. Kharashka mishiinka waa 300 oo hryvnia ah.
Waa muhiim! Qaadashada shimbiraha waxaa weheliya ur aan fiicneyn. Nidaamkani wuxuu si fiican u qabtaa dibadda.
Talooyin iyo khiyaamo loogu talagalay ruxida digaagga
Waxaan tixgelinnay farsamada guud ee digaaga hilibka digaaga, laakiin hawlaha guuleysta ee nooc kasta oo shimbir ah wuxuu leeyahay sirihiisa gaarka ah. Waxaynu baranaa sifooyinka khafiifinta digaagga, berriga iyo shimbiraha.
Sidee si dhakhso ah u nadiifin baco digaaga
Haddii aad ubaahan tahay in si degdeg ah loo sii daayo barkada digaaga ee baalasha, waxaad u baahan tahay in aad ku dhex cabto biyo kulul oo leh nus shaaha oo ka mid ah shukulaatada lagu daro nuska daqiiqo. Intaas ka hor, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in bakhtigu uu gebi ahaanba daadinayo dhiig. Ka dib, ilaa baqtigu uu qabow yahay, maqaarka ayaa laga saarayaa lugaha digaagga, shimbirta ayaa la qaboojiyey, waxad bilaabi kartaa inaad rujiso. Nadiifinta baadad digaag ah waxay badanaa ku dhacdaa labo farood: suulka iyo indha indheynta.
Qabashada baalal dhowr ah ayaa ku dhaca jihada koritaanka. Baalalka qotada dheer, iyo sidoo kale jajabkii la jebiyey, ayaa la soo baxaa cambaareyn. Meydka xayiraadda ka soo baxaya roodhiga waa la qalajiyey oo si tartiib ah ayuu u dillaacay dabka furan ee dabka, kariyaha gaaska ama boodhka, ka dib marka digaaggu diyaar u noqdo gunta.
Ma taqaanaa? Wajiga iyo hoos u soo baxa waa in lagu qooyo dhowr saacadood biyo diirran oo leh saabuun, maydhin oo la qalajiyey. Tani waxay hubin doontaa nabadgelyada dheer.
Sida loo nadiifiyo berriga ka dib markii la gowraco
Ka hor inta aan la gowracin, goose waxaa loo wareejiyaa qol qallalan leh iftiin yar, haddii ay suurtogal tahayna waxaa loo oggol yahay in lagu dabaasho webi ama balli si loo hubiyo in baalku nadiif yahay. Biyaha waxaa la siiyaa shimbirta, cuntadu mar dambe lama siiyo 10 saacadood ka hor inta aan la gowracin si loo nadiifiyo viskaha hab dabiici ah. Marka la dilo goose, dhiig ayaa laga nadiifiyaa iyada oo lugaha laga joojiyo dhowr saacadood si loogu qaboojiyo.
Ka dib marka dufanka subcutaneous uu adkeeyo, sii wad raashinka. Ka saar bucooyinka ballaaran, ka dibna yar, iyo ugu dambeyntii soo noqnoqon - hoos. Berriga waxaa lagu nadiifin karaa hab kasta oo habboon - qallalan, qashin iyo isticmaalida shimbir gaar ah oo kudheer, sida kor ku xusan.
Qaar ka mid ah shimbiraha ayaa abuuray hab kale oo lagu xoqdo berriga. Shimbirta ayaa lagu bamgareynayaa bamku iyada oo la isticmaalayo bamka ilaa inta maqaarku si adag u xirxiraan, qoorta ayaa loo xirxiray si ay hawada ugu qabato, ka dibna bacda lagu duubo maro qoyan ama faashad ah, waxay bilaabaan inay ku dhaqaan qulqulo qoyan oo ka yimaada birta. Dharka qalajinta ayaa la furay, goosguna wuxuu bilaabmaa inuu ruxo. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, habka lagu nadiifiyo bakhtigu waa la celin karaa. Ka dib markii ay ka saareen baadad, baqtigu waa la yaabay oo la jaray.
Waa muhiim! Hilibka duurku wuu ka badbaaday fiicnaan haddii shimbirtu ay ku rido habka qalalan.
Sida loo daadiyo shinbiraha
Noocka rooggu wuxuu si gebi ahaanba u dhigmaa qulqulin, maxaa yeelay biyuhu waxay leeyihiin dufan badan oo subag leh. Ka dib markii la gowraco, dhiig ka yimaado, qaboojiyaha barkin iyo ka saar buco si kasta. Faafidda haray ayaa laga saari karaa iyadoo la jarayo dhabarka mindhicirka ama si fudud loo rusheeyaa bur, oo ku shubaya olol dab ah oo furan. Heesidda waa in si degdeg ah loo sameeyaa si looga hortago boodhka iyo ka daadinta dufanka shimbirta.
Cuntada carruurta iyo dadka waaweyn waa inay ku jiraan hilibka digaaga. Waxay u adeegtaa ilaha amma asaasiga ah, macro-yaryar iyo nafaqeeyayaal, iyo fitamiino. Tan iyo digaagga, shinbiraha iyo berriga ayaa koray iyaga oo u gaar ah waxay noqon doonaan kuwa ugu caansan, ka dibna fursadda ugu yar ee ay u qalantaa in ay hesho shimbiraha, gaar ahaan tan iyo nuucista iyo processing ma aha ganacsi khatar ah. Qalab lagu nadiifiyo shimbiraha ka soo duubay ayaa kaliya dardar gelin doona nidaamkan.